. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: March 2011
ရေးသားသူ မိုးခါး at 3/27/2011 11:22:00 PM 13 comments:
ရေးသားသူ မိုးခါး at 3/25/2011 12:04:00 AM 13 comments:
ဟုတ်ကဲ့ .. မိုးခါးကို သူငယ်ချင်းတွေ ဆွေမျိုးတွေ တော်တော်များများက ပြောပါတယ် .. နင် တော်တော် ကံကောင်းတယ်တဲ့ ..
သူတို့ပြောတာကို လက်ခံမိပါတယ် .. ပြောပလောက်အောင် မရုန်ကန်ခဲ့ဘူးပါဘူး .. ဒါကြောင့်လဲ ၀ီရိယအား တော်တော်နည်းကြောင်းလဲ ၀န်ခံရပါမယ် .. :D (ဒါ မကောင်းဘူးနော် .. ကိုယ့်အောက်အငယ်တွေ အတုမယူကြနဲ့ :P)
နောက်ကုမ္ပဏီက အင်တာဗျူးခေါ်တဲ့ဖုန်း လာအပြီး သူတို့ ပို့လိုက်တဲ့ လိပ်စာနဲ့ မြေပုံကို ကြည့် .. အင်တာဗျူးသွားဖို့ ပြင်ဆင်ရပါတယ် .. အစ်မတယောက် အဖော်လိုက်ရင်းကကို နေရာကို အတော်လေး ရှာရပါတယ် .. နောက်ဆုံးတော့ တွေ့ပြီ ဆိုပါတော့ ..
ဗျူးတာက အမျိုးသမီးပါ .. နောက်မှ သိလိုက်ရတာက သူတို့က အေးဂျင့် .. ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီဘက်ကပဲ ပိုက်ဆံယူတဲ့ အေးဂျင့်ပါ .. အမျိုးသမီးနာမည်က katherine Koh ပါ .. ပတ်စ်လျှောက်ပေးထားတဲ့ ကုမ္ပဏီက သူဌေး နာမည်က Barnet Koh ပါ .. အစ်မတွေကတောင် ပြောသေးတယ် .. မီးငယ်က Koh တွေနဲ့ အကျိုးပေးသလားမသိဘူးတဲ့ .. ;) သြော် .. ခုလက်ရှိ ကုမ္ပဏီ စ၀င်ကာစ မိုးခါးအထက်က မန်နေဂျာက Keith Khoo ပါ .. :D (အသံထွက်က လာဆင်နေသေးတယ်နော် .. :D)
အဲဒီအချိန် ကိုယ့်စိတ်ထဲ ပျော်လဲပျော် ရင်လည်း ခုန် .. တင်ထားတဲ့ ပတ်စ်အတွက်လည်း အရင်သူဌေးကို အားနာ .. ဟိုအလုပ်လည်း လိုချင် ဒီအလုပ်လည်း လိုချင်ဖြစ်ပါတော့တယ် .. ၂ခုလုံးက တမျိုးစီ ကောင်းကွက်တွေ ရှိနေတော့ လူလည်း အတော် ချာလပတ် ရမ်း သွားပါတယ် ..
အိမ်ကျတော့ အစ်မတွေနဲ့ ခေါင်းချင်းဆိုင် .. ဒူးတိုက် ဆွေးနွေးပါတော့တယ် ..
ကုမ္ပဏီအကြီးအတွက် ပတ်စ်ကို စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုတာ နားလည်ပေမယ့် ဟိုဘက်က သူဌေးကိုလည်း အားနာမိပြန်ပါတယ် .. (မြန်မာစိတ်ဓါတ် ထင်ပါရဲ့) ပတ်စ်တင်ပေးထားတဲ့ သူဌေး အားနာပြီး ဟိုဘက်ကန်ဆယ်လုပ်ပြီးမှ ပတ်စ် ရီဂျက်ဆို ကိုယ်က ကြားထဲက ကွိဦးမယ် .. သူဌေးဆီပဲ ပြေးပြီး ငါ့ပတ်စ် အဆင်မပြေရင် နင် အပီး တင်ပေးမှာလား ရအောင် လုပ်ပေးမှာလားပဲ ပြေးပြောရမလိုလို .. တခါတည်း သေချာတဲ့ဆီပဲသွားပြီး ပတ်စ်တင်ထားတာ ကန်ဆယ်လုပ်ပေးပါပဲ ပြောရမလိုလိုပါပဲ .. နောက်ဆုံးတော့ စိတ်ကို ဒုန်းဒုန်းချ .. ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံနဲ့ အဆင်ပြေတာ တွေ့ချင်ရာသာတွေ့ပစေတော့လို့ တွေးလိုက်ပါတယ် .. မေတ္တာတွေလည်း ပို့လိုက်ရတာ လွန်ပါရော .. အထက်အောက် အလယ် အကုန် အစုံပါပဲ .. အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဂျပန်ကုမ္ပဏီက ဖုန်းတွေခေါ် ပတ်စ် တင်လို့မရဘူး .. ပရောဆက် တခုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး ပြောလာပြန်ပါရော .. ကံလေးသာပြန်တော့ အဲ့ဒီနေ့က စနေမို့ ဟိုဘက်ရုံး ပိတ်ပါတယ် .. ဖွင့်ရင်ပြောလိုက်ပါ့မယ် ဖော .. ဒါဆိုလည်း အမြန်ဆုံး ကန်ဆယ်လုပ်ပါပေါ့ .. သူတို့ တင်ပေးမယ်ပေါ့ .. အိုး မူးလိုက်တာ မူးလိုက်တာ ဆိုတာ ခုတွေးရင် ခုပြန်မောတာပါပဲ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 3/23/2011 11:59:00 PM 10 comments:
ပထမရက် အင်တာဗျူးကို မိုးရေတရွှဲရွှဲနဲ့ သွားဖြေပြီး နောက်မှာ နောက်ရက် second interview ကို နေ့လည်ဘက်ထပ်ခေါ်လို့ သွားရပါတယ် .. ကုမ္ပဏီက ဘယ်လောက်ချောင်ကျလဲဆိုတာ ပထမရက် သွားပြီးတာတောင် နောက်ရက်လည်း တန်းတန်းမတ်မတ်မရောက်ပါဘူး .. လည်နေပါတယ် .. နောက်ဆုံး ချိန်းထားတဲ့ အချိန်နီးနေတော့ တက်စ်စီနဲ့ လစ်ရပါရော .. နောက်ဆုံးတော့ အချိန်မှီရောက်သွားပါတယ် ..
ရောက်သွားပြီး သူဌေးယူလာခိုင်းတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပရောဂျက်တွေ ပြ .. သူ့တို့ကလည်း ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့ပေါ့ .. ပြီးတော့ အော်တိုကဒ် ဆွဲပြဖို့ ပြောလာပါတယ် .. ဒီကလည်း အိုကေပေါ့ .. ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ အော်တိုကဒ်ဆော့ဝဲ မရှိပါဘူး .. ဒီတော့ ဖုန်းတွေဆက်ပြီး သူ့သူငယ်ချင်းဆီက ငှားဖို့ လုပ်ပါသေးတယ် .. ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတော့ ကိုယ်ကလည်း လျှာက ရှည်တယ်လေ .. ရောက်ကာစ အထာကလည်း မနပ်သေးတော့ ငါ့မှာ ရှိတယ်ပေါ့ .. ဒါဆို သွားယူမယ်ဖြစ်ရော .. သိပ်လည်း မဝေးပါဘူး အိမ်နဲ့ အလုပ်က .. Eunos နဲ့ Aljunied ပါပဲ .. ဒီလိုနဲ့ သူဌေးကားနဲ့ အိမ်သွားယူတယ်ပေါ့ ..
နောက်ဆုံးတော့ အော်တိုကဒ်လဲ ရပြီ အလုပ်နေရာလဲ ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ Plan ပုံ 2D drawing ၁ခု ထုတ်လာပါတယ် .. ဘယ်လောက်ကြာမလဲ တဲ့ .. ပြောလိုက်တယ် .. နာရီဝက်လို့ .. :P ဆွဲလဲဆွဲရော မီလီမီတာကလည်း သုံးနေမကျတာရော သိပ်မကျွမ်းကျင်သေးတာရော ပေါင်းပြီး ၃နာရီ ကြာသွားပါတယ် .. :P ပြသနာတော့ မရှိပါဘူး .. :D
ဒီလိုနဲ့ သူတို့လည်း ကြိုက်တယ်ပေါ့ .. လခတွေ ဘာတွေ ပြော .. နောက်နေ့ ပတ်စ်တင်ပေးမယ် ဆိုလာပါတယ် .. သူဌေးက သူဌေးအသစ်စက်စက်ဖြစ်တော့ ကုမ္ပဏီအကြောင်း အလုပ်သမားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ သူဘာမှ နားမလည်ပါဘူး .. ဒီတော့ အစ်မကို ဖုန်းဆက် အပူကပ် .. အစ်မဆီက နည်းတွေ မေး လုပ်ရပါတယ် ..
သူဌေးက ပြောပါတယ် .. သူတို့က ရေရှည် လုပ်စေချင်တယ် .. ကုမ္ပဏီကလည်း ခုမှ စဖွင့်ကာစ .. အိမ်တွင်းအလှဆင်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းပေးတက်မယ် .. 3D ပေးတက်မယ် စသည်ဖြင့်ပြောပါတယ် .. စာချုပ်လည်း ချုပ်ရပါမယ် .. ဘာလို့ဆိုတော့ လာတဲ့ အလုပ်သမားတွေက ပညာစုံရင် တာ့တာ လုပ်သွားတတ်လို့ပါတဲ့ .. ကိုယ်ကလည်း အလုပ်ရချင်နေတာဆိုတော့ အကုန် အင်း ပေါ့ .. အဆုံးတော့ နောက်နေ့ အလုပ်လျှောက်ပေးမယ် .. လိုတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ယူလာဖို့ မှာစရာ ရှိတာမှာပြီး အိမ်ပြန်ပါတယ် ..
အိမ်ရောက်တော့ အစ်မတွေက ၀ိုင်းပြီး အကြံပေးကြတယ် .. စာတိုက်က မတင်ခိုင်းဖို့ အွန်လိုင်းက တင်ခိုင်းဖို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့ ..
နောက်ရက် ခေါ်ထားတဲ့ အချိန်ထပ်သွားရပါတယ် .. ပတ်စ် တင်မယ်ဆိုတော့ သူတို့က စာတိုက်ကတင်တာပဲ သိတယ် .. အွန်လိုင်းက တင်တာမသိဘူး .. ဒီတော့ အစ်မဆီ ဖုန်းဆက် သူဌေးနဲ့ ပြောခိုင်း .. နောက်ဆုံးတော့ ကုမ္ပဏီကို register အရင်လုပ်ရမယ် .. ဘာညာနဲ့ အဲနေ့ မတင်ဖြစ်ပြန်ပါဘူး ..
အဲဒီနေ့မှာ သူဌေးနောက်ကို လျှောက်လိုက်ရပါတယ့် .. ပတ်တိုင်း လုပ်မယ့် ကောင်မလေးလည်း လာပါတယ် .. ခေါ်သွားတဲ့နေရာတွေက မီးဆိုင်းတွေ အိမ်တွင်းအလှဆင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ ၄ ၅ ဆိုင်ပါပဲ .. မိတ်ဆက်ပေးတယ် .. ဒါ သူ့ဝန်ထမ်းပေါ့ .. နောက်ဆို သူတို့တွေ လာမယ် ဘာညာပေါ့ .. အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ ည ၈နာရီကျော်သွားပါတယ် ..
နောက်ရက်တွေကျ သူတို့ ပတ်စ်တင်ပေးပြီး ကျလာမှာကို ထိုင်စောင့်ပါတယ် .. တရက်တော့ တင်ပြီးပြီ လို့ အကြောင်းကြားလာပါတယ် .. ကိုယ့်အလုပ်က သတင်းထိုင်စောင့်ရုံပေါ့ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 3/22/2011 11:43:00 PM 11 comments:
ရေးသားသူ မိုးခါး at 3/19/2011 08:49:00 PM 13 comments:
ရေးသားသူ မိုးခါး at 3/10/2011 12:06:00 AM9comments:
အစ်မတွေ အကိုတွေကတော့ မီးငယ်လေးပါပဲ .. တခါတလေ ညီမလေး .. တခါတလေကျ သရဲမ တဲ့ .. :P
တယောက်သောသူက ခေါ်ချင်သလိုခေါ်ပါတယ် .. ဟိတ် .. ဒေါ်မိုးခါး .. Etc .. :P စိတ်ကူးပေါက်သလိုပဲ .. ဟဲဟဲ :P
ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေကတော့ နာမည်တွေလည်း လျှောက်ပေးသေးတယ် .. ဒါပေမယ့် ကံများ ကောင်းချင်တော့ မတွင်ဘူးဗျာ ..
မိုးခါး မျက်နှာက စူပုတ်နေတတ်ပါတယ် .. ငယ်တုန်းကပိုဆိုးတာ .. ဒီတော့ စူပုတ် တဲ့ ..
အဲဒီ ငယ်တုန်းကတော့ လာလာစရင် သိပ်စိတ်ဆိုးတာပဲ .. ခုပြန်တွေးကြည့်တော့ ပျော်စရာ ဖြစ်နေပြန်ရော ..
အဲ .. ကိုယ်စကားပြောလို့ရှိရင်တော့ မိုးခါး သုံးလေ့ရှိတာ .. နာမည်ပဲ များပါတယ် .. ငယ်တုန်းကဆို သမီး သမီး နဲ့ပေါ့ .. တော်တော်အသက်ကြီးလာပြီး အလုပ်ဝင်တော့ စဉ်းစားတယ် .. ဒီသမီး ဆိုတာကြီး ဖျောက်မှထင်တယ်ပေါ့ .. ဘာလို့ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံဘူးတယ်လေ .. ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးလောက်တဲ့ သူက သမီး လို့ သူ့ကိုယ်သူ ပြောသွားတာမျိုး .. အဲလိုကျ ကိုယ့်စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်တာပေါ့ .. :P ကိုယ်ကပဲ ရင့်နေသလိုလို .. :P ပြီး ကိုယ့်ရှေ့မှာ တချို့တွေက ပြောတာ မြင်တော့ ကြားတော့ သိပ်မလိုက်ဖက်သလို စိတ်ထဲဖြစ်တာနဲ့ နာမည်နဲ့ သုံးတဲ့အကျင့်ကို ပြင်လိုက်ပါတယ် .. အစ်မတန် အစ်မ ညီမတန် ညီမ သမီးတန်လည်း သမီးလိုက်တာပေါ့ ..
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ နင် ငါ ပြောတာပဲ အားရပါတယ် .. အသက်နဲနဲကွာတာလောက်တော့ နင် ငါပဲ ပြောလိုက်တယ် .. အဲဒီအခါမျိုးက ပိုပြီး လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတယ်လို့ ခံစားရတယ်လေ ..
ငယ်တုန်းက နာမည်လေးတွေ သိသွားရအောင်ပါ .. နောက် တွေ့ရင် ခေါ်ရတာပေါ့ .. ဒီတော့ အပျော်လို့ သဘောထားပြီး ရေးပေးကြပါနော် .. စိတ်ကူးရှိသွားတဲ့သူတွေပေါ့ ..း)
မှတ်ချက် - အရင်စာတွေ ကော်မန့်တွေ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် .. အရင်က ဘလော့မှာ တော်တော်ပျော်ဖို့ ကောင်းသလိုပဲ .. ခုတော့ ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ စာတွေလည်း မရေးကြလို့ .. အချိန်ပေးနိုင်ရင် ရေးပေးကြပါနော် ..း)) ကျေးဇူးကြိုတင်ပါတယ် .. :D
ရေးသားသူ မိုးခါး at 3/01/2011 04:54:00 PM 10 comments: